Tank Truck အတွက်လူမီနီယမ်ပြား | YK လူမီနီယမ်
Tank Truck အတွက်လူမီနီယမ်ပြား
Tank ကုန်တင်ကားများသည်အရည်အမျိုးမျိုးသယ်ဆောင်ရန်အသုံးပြုသည့် tank ပုံစံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များဖြစ်သည်, အရည်ဓာတ်ငွေ့နှင့်အမှုန့်ကုန်ပစ္စည်းများ, ထိုကဲ့သို့သောဓာတ်ဆီအဖြစ်, ရေနံစိမ်း, သဘာဝဓာတ်ငွေ့, အရက်နှင့်အခြားလောင်ကျွမ်းသောနှင့်ပေါက်ကွဲကုန်ပစ္စည်းများ. အဆိုပါတင့်ကားထရပ်ကားကိုယ်တိုင်ကကြီးမားတဲ့နှင့်လေးလံသည်, နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပစ္စည်းများ၏အလေးချိန်နှင့်အတူဒွန်တွဲ, ကားမောင်းနေစဉ်အတွင်းအန္တရာယ်အချက်ကိုတိုးမြှင့်ပေးလိမ့်မည်. ထို့ကြောင့်, တင့်ကား၏အလေးချိန်ကိုလျှော့ချရန်အတွက်တင့်ကိုယ်ထည်ကိုပြုလုပ်ရန်အတွက်ပေါ့ပါးသောပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်.
အကြံပေးအဖွဲ့ထရပ်ကားပေါ့ပါးဖော်ပြပါ, လူတိုင်းစဉ်းစားပါလိမ့်မယ် 5052 လူမီနီယံပန်းကန်, 5083 လူမီနီယံပန်းကန်, 5754 လူမီနီယံပန်းကန်, 5454 လူမီနီယံပန်းကန်, 6061 လူမီနီယံပန်းကန်နှင့် 6082 လူမီနီယံပန်းကန်. တိုင်ကီကိုယ်ထည်အတွက်အလူမီနီယမ်ပြား၏အထူသည်ယေဘုယျအားဖြင့် 5mm ဖြစ်သည်. တင့်ကားကိုယ်ထည်ပိုကြီးလေ, တိုင်ကီကိုယ်ထည်၏လုံခြုံမှုကိုသေချာစေရန်အလူမီနီယမ်ပြားပိုထူလေလေဖြစ်သည်. tank truck ထရပ်ကားတစ်လုံးလုံးသည်အဓိကအားဖြင့်အကာများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်, လှိုင်းဒိုင်း, spouts နှင့်အခြား parts.Usually ကြာပါသည် 4-6 လူမီနီယံပန်းကန်ဂဟေအပိုင်းပိုင်းနှင့်ဖြစ်လာသည်. သူတို့ထဲတွင်, အရေးအပါဆုံးပူးတွဲတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းချမှတ် 5083 H111 ပြည်နယ်အတွက်လူမီနီယံပြား. တင့်ကားပါးစပ်၏ဘေးထွက်တွင်ယေဘုယျအားဖြင့်သတ္တုစပ်ကဲ့သို့သော O ပြည်နယ်ကိုလက်ခံသည်, because O state more softer. အဆိုပါ clapboard တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းချမှတ်သည် 5083 – အိုပြည်နယ်. ဖြည့်စွက်ကာ, ၏ H111 status ကိုအသုံးပြုပြီးဖောက်သည်လည်းရှိပါတယ် 5454 အကြံပေးအဖွဲ့ခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်လူမီနီယံပြား.
လူမီနီယမ်၏အားသာချက်များ ပန်းကန် တင့်ကားများအဘို့
1.တိုင်ကီကုန်တင်ကားများအတွက်လူမီနီယံပြားသည်အလေးချိန်ပေါ့ပြီးအလေးချိန် ၂.၇ ဂရမ်သာရှိသည် / cm3. သံမဏိပြားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်, ၎င်းသည်တင့်ကားကုန်တင်ယာဉ်များ၏အလေးချိန်ကိုများစွာလျှော့ချနိုင်သည်, အားဖြင့်တင့်ကားကုန်တင်ယာဉ်များ၏လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချပေးသည်, ထွက်ကုန်ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချ, နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်.
2.တိုင်ကီကုန်တင်ယာဉ်အတွက်လူမီနီယမ်ပလပ်စတစ်သည်ချေးခြင်းနှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်. ဟိ5စီးရီးအလူမီနီယမ်အလွိုင်းသည်ပုံမှန်သံချေးမသည့်အလူမီနီယံပြားတစ်ခုဖြစ်သည်. ဟိ6စီးရီးလူမီနီယံပန်းကန်ပိုကောင်းချေးခုခံရှိပါတယ်. သူတို့၏သာလွန်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသံမဏိဖြင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသည်. လူမီနီယမ်အလွိုင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောတိုင်ကီကိုယ်ထည်သည်တာရှည်ခံပြီးအတွင်းပိုင်းတွင်မည်သည့်အကာအကွယ်ပေးစရာမလိုအပ်ပါ. ၎င်းသည်အမျိုးမျိုးသောအရည်များသို့မဟုတ်အရည်ဓာတ်ငွေ့များကိုမဖိတ်ခေါ်ဘဲသယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်သည်.
3.အကြံပေးအဖွဲ့ထရပ်ကားအတွက်လူမီနီယမ်ပြားသည်မြင့်မားသောဘေးကင်းလုံခြုံမှုစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်, နှင့်လူမီနီယမ်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောသတ္တုသည်. တိုင်ကီကုန်တင်ကားများအတွက်အလူမီနီယမ်ပြားသည်လျှပ်စစ်စီးကူးမှုနှင့်စွမ်းအင်စုပ်ယူမှုစွမ်းအားကောင်းမွန်သည်. အခါတိုက်မှုဖြစ်ပေါ်သည့်အခါ, အငြိမ်လျှပ်စစ်မီးသည်တင့်ကားကိုယ်ထည်ပေါ်တွင်ခဲခဲသည်, ထိုသို့မီးပွားထုတ်လုပ်ရန်ခက်ခဲသည်, အားဖြင့်ပေါက်ကွဲမှုမတော်တဆမှုများဖြစ်ပွားမှုကိုလျှော့ချ.
အလွိုင်းတန်း အထူ(မီလီမီတာ) အကျယ်(မီလီမီတာ) အရှည် (မီလီမီတာ)
အလွိုင်းတန်း ပြီးတော့ Fe နှင့်အတူ Mn Mg Cr Zn မင်း Other（%）
အလွိုင်းတန်း ဒေါသ Rm(Mpa) Rp.02(Mpa) elongation(%)
အို / H111 75275 5125 ≥15
H112 75275 5125 ≥12
5052 အို / H111 170-215 ≥65 ≥16
H112 ≥190 ≥80 အွမ် ၇
5754 အို / H111 190-240 ≥80 ≥16
5454 H32 50250 80180 အွမ် ၈
5182 အို / H111 80280 5125 ≥26